Nanjary ekena bebe kokoa ny "fitsangatsanganana mahafinaritra"
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nanjary ekena bebe kokoa ny "fitsangatsanganana mahafinaritra"
Febroary 7, 2020
by Tonian-dahatsoratra syndicated
Mpanoratra Tonian-dahatsoratra syndicated
Ny dia raharaham-barotra miaraka amin'ny fialam-boly dia knwon toy ny fitsangatsanganana Bleisure.
Fikarohana iray manamafy ny dia ataon'ny orinasa dia heverina ho "perk perk asa" ho an'ny matihanina amin'ny sokajin-taona rehetra - ary mampiseho ny famantarana ny fanekena bebe kokoa.
Raha ny fanadihadiana natao dia mitatitra ny fahafaham-po kokoa amin'ny kalitaon'ny fiainany ireo mpiasa manao fitsangatsanganana an-dàlana raha eny an-dàlana (91% vs. 79%) raha oharina amin'ireo mpandeha tsy miala sasatra. Inona koa no vitsy kokoa ny olona mahatsapa fa mila mampihena ny fialan-tsasatra ataony amin'ny lehibeny (19% vs. 21%) na ny mpiara-miasa aminy (22% vs. 24%), raha oharina tamin'ny herintaona lasa izay.
Mahaliana fa na dia mino ny ankamaroan'ny mpitsangatsangana aza ny fizotran'ny asa dia mahomby amin'ny asany (86% vs. 69% ireo mpandeha tsy miala sasatra), ny fanadihadiana nataon'ny National dia nahita lehilahy vonona kokoa hanome ny tombam-bidiny sasany hahazoana tombontsoa amin'ny fivezivezena. toy ny:
Karama ambonimbony (21% vs. vehivavy 10%)
Andro vitsy kokoa (22% vs. vehivavy 10%)
Tsy misy ora fahavaratra / ora mihodina (28% vs. 21% vehivavy)
Ankoatr'izay, ny lehilahy koa dia mety hanao fitondran-tena mahasoa rehefa mandeha amin'ny asa aman-draharaha, toy ny fanokanana fotoana ho an'ny tenany (68% vs. 58% vehivavy), fanatanjahan-tena (57% vs. 45% vehivavy) ary fanarahana sakafo mahasalama ( 44% vs. 35% vehivavy)
Rehefa manitatra ny kariera ataon'izy ireo ny zazakely ary manomboka ny asany ny mpiasa ao amin'ny Generation Z, dia tonga tamina mpiasa efatra-taranaka izahay. Ary ao anatiny, ny boomers zazakely, ny Generation Xers, ny millennial ary ny Gen Zers dia samy manana ny fahitany ny asany sy ny fotoanany manokana - na any amin'ny birao izany na rehefa handeha hanao asa izy ireo. Saingy manerana ireo vondrona efatra dia misy fironana mazava: Ilay tanjona tsy azo atao amin'ny "fifandanjana amin'ny fiainana-miasa" dia manome làlana "fampifangaroana fiainana-miasa" mora kokoa izay mifanaraka amin'ny fandaharam-potoanan'ny mpiasa maoderina.
Ny fanadihadiana nasionalin'ny State of Business Travel fahatelo an'ny National Car Rental dia mampiseho fa na dia mbola manandrana manamboatra tsipika manelanelana ny asan'izy ireo sy ny fiainany manokana aza ny 67% amin'ireo mpikatroka dia mino ny 65% ​​fa tanjona tsy azo tanterahina izany. Raha tokony ho izany, mihoatra ny antsasaky ny valinteny izao no mifangaro ny fiainam-piasana sy ny fiainany manokana fa tsy manandrana mitazona azy ireo hisaraka.
Hanao ahoana ny fifangaroan'ny fiainana? Nandritra ny herinandro antonony dia namaly ny mailaka ny mpiorina taorian'ny ora niasana tamin'ny 3.97 andro, tonga aloha na nijanona tara tamin'ny 3.72 andro ary niantso antso rehefa avy niasa 3.00 andro. Saingy, raha tany am-piasana izy ireo dia namaly ihany koa ny mailaka manokana tamin'ny 2.94 andro, niantso antso manokana tamin'ny 2.85 andro ary niasa tamin'ny tetik'asa manokana tamin'ny 1.63 andro. Ity fiovana amin'ny fifangaroana ity dia tohanan'ny mpitarika zokiolona sy mpanatanteraka, 65% amin'izy ireo no nilaza fa aleony mifangaro ny fiainany manokana sy matihanina.
Mitohy ny dia "Bleisure" ary ekena bebe kokoa
Mampiseho ity fironana ity fa mihanaka indrindra amin'ireo mpandeha raharaham-barotra ary antsoina matetika hoe "fialamboly." Ny fanadihadiana dia nahitana ny ankamaroan'ny mpandeha raharaham-barotra (81%) manao karazana fitsangatsanganana an-tsokosoko, ao anatin'izany ny fampidirana hetsika fialamboly amin'ny fitsangatsanganana asa (61%), fanitarana ny dia ataon'ny orinasa amin'ny fitsangatsanganana (41%) ary famandrihana fialan-tsasatra manodidina ny dia fandraharahana (33 %). Ny millennial (86%) dia toa nanao fitsangatsanganana an-tsokosoko noho ny Gen Xers (76%) sy boomers zaza (73%). Ho fanampin'izany, ny mpitarika zokiolona / mpanatanteraka dia saika in-droa manitatra ny dia ataon'izy ireo amin'ny dia fialan-tsasatra (50%) na manoratra vakansy manodidina ny diany (40%) noho ny tsy mpitantana (28% sy 27%).
"Ao amin'ny tontolon'ny finday mifamatotra sy mifamahofaho, mahita mpiasa izahay - sy ireo mpanao dia lavitra, indrindra - mahita fomba vaovao handanjalanjana ny asany sy ny fotoanany manokana," hoy i Don Moore, filoha lefitra zon'ny fanofana orinasa manerantany ho an'ny Enterprise Holdings, izay manana sy miasa ny National Car Rental, ary koa ny marika Enterprise Rent-A-Car sy Alamo Rent A Car. “Rehefa miditra amin'ity folo taona vaovao amin'ny taonjato faha-21 ity isika, ny fikarohana nataon'ny National dia manolotra ity fiovan'ny fisainana ity. Raha tokony hiezaka hahatratra ny zavatra antenaina tsy ampoizina isika, dia mitady fomba hampifangaroana ny asa sy ny fialam-boly hahatratra ny fiainana sy ny fahafaham-po amin'ny asa. ”
Rehefa mandeha amin'ny asa aman-draharaha ianao, ny mpiasa manao fitsangatsanganana an-tongotra dia mitaky fahafaham-po bebe kokoa amin'ny kalitaon'ny fiainany raha eny an-dàlana (91% vs. 79%) noho ireo mpandeha tsy miala sasatra. Izy ireo koa dia nitatitra tombontsoa fanampiny toy ny fanarahana ny sakafo ara-pahasalamana (41% vs. 32%), ny fampihetseham-batana (53% vs. 41%) ary ny fiverenana dia mahatsiaro ho velombelona (54% vs. 35%). Mahaliana fa misy porofo fa ny fitsangatsanganana an-dàlam-pialana dia mahazo fanekena bebe kokoa. Sivy amby fitopolo isan-jaton'ny mpandeha fialam-boly no tena mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny diany raha toa ka fantatr'izy ireo fa afaka manitatra ny fijanonany izy ireo, miakatra sivy isan-jato amin'ny fanadihadiana tamin'ny taon-dasa, ary vitsy ny olona nahatsapa ny filàna mampihena ny fialamboliny amin'ny lehibeny (19% vs. 21%) na ny mpiara-miasa aminy (22% vs. 24%), raha oharina tamin'ny herintaona lasa izay.
Ny zava-dehibe, ny ankamaroan'ny mpandeha amin'ny fialam-boly (86% vs. 69% an'ny mpandeha tsy miala sasatra) dia mino fa ny fitsangatsanganana ara-barotra dia manampy amin'ny fahombiazan'ny asany ary manampy azy ireo hanangana fifandraisana lehibe izay tsy azon'izy ireo raha tsy nisy dia lavitra (81% vs. 73%) .
Misy fiantraikany amin'ny safidin'ny fitaterana an-tany ny fifangaroana
Ny fitaterana an-tany dia mitohy ho singa iray lehibe amin'ny fitsangatsanganana orinasa. Raha ny fanadihadiana nataon'ny National dia miankina amin'ny fifangaroan'ny safidy fitaterana ny mpandeha arakaraka ny filany. Ohatra, ny fiara manofa no safidy lehibe indrindra amin'ny fitetezana ny tanàna (78%) sy ny fandehanana any amin'ny fivorian'ny orinasa (72%), raha ny ridesharing kosa no ampiasaina hankanesana any amin'ny trano fisakafoanana sy fisotroana (68%). mankanesa sy miverina amin'ny seranam-piara-manidina (70%).
"Ny fitaterana an-tany dia tsy tranga iray sahaza ny rehetra amin'ireo mpandeha raharaham-barotra," hoy i Moore. "Misafidy ny mpiasa, ary mamela ny fomba fitateram-pitaterana maro mandritra ny dia iray ny politikam-pitaterana orinasa ary mitohy mitana andraikitra lehibe amin'izany fifangaroana izany ny fanofana fiara."
Nampiasaina tamin'ny teknolojia
Ny fampifangaroana ny fiainana sy ny fialam-boly dia samy ampiasain'ny teknolojia, izay manana anjara toerana lehibe amin'ny famaritana izay marika tadiavin'ny mpandeha.
Ny angona fanadihadiana dia mampiseho marika 90% misafidy izay manome azy ireo fitaovana teknolojia manatsara ny traikefa fitetezana raharaham-barotra. Ary ny 90% -n'ny mpandeha miala sasatra dia mahatsapa ny fiara mifamatotra ho mahasoa amin'ny dia lavitra ataon'ny orinasa. National, marika voalohany amin'ny fanofana fiara ho an'ny mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina matetika, dia manohy manatsara ny tolotra omeny ho an'ny mpiady amin'ny arabe miaraka amina hetsika vaovao sy sehatra teknolojia natao hamoronana traikefa mpanjifa tsara indrindra. Ny rindrambaiko finday nahazo loka dia manome mpizahatany manana teboka tokana ahafahana mitantana ny lafiny rehetra amin'ny dia fanofana. Ary ny tranokalan'ny National dia vao haingana no laharana faha-1 amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa noho ny fanamorana ny fivezivezena, ny fisehoana ankapobeny, ny serivisy / ny hetsika, ny fahadiovan'ny fampahalalana omena ary ny hafainganan'ny pejy.
NY FANONTANIANA: Ny fanadihadiana nasionaly momba ny fitsangatsanganana fiara an'ny nasionaly dia notontosaina tamin'ny 18-26 Novambra 2019, teo amin'ireo mpizahatany matetika 995 amerikana tao amin'ny tontolon'ny fikarohana an'i Lucid's Federated Sample momba ny mpanjifa amerikana. Tamin'ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana dia tokony ho 25 ka hatramin'ny 65 taona ny mpandray anjara, miasa na miasa mandritra ny fotoana maharitra (35+ ora isan-kerinandro) ary nandeha nandritra ny 12 volana lasa ho an'ny tanjona ara-barotra, miaraka amin'ny alina farafahakeliny valo alina.